ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကိုယ်ရံတော်အထူးတပ်ဖွဲ့ ထူထောင်ထား – AHUNT BHONE MYAT
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကိုယ်ရံတော်အထူးတပ်ဖွဲ့ ထူထောင်ထား
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကိုယ်ရံတော်အထူးတပ်ဖွဲ့ ထူထောင်ထား
အံ့ဘုန်းမြတ် ၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၉
(၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်။ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ နံနက်ပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်)
နအဖအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက သက်တော်စောင့်အထူးတပ်ဖွဲ့ကို ထူထောင်ထားပါတယ်။ ဒီအထူးတပ်ဖွဲ့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်ကျော်ကတည်းက စစ်ပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ ကလေးစစ်သားတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာလို့ တပ်မတော်အဆင့်မြင့်အရာရှိအသိုက်အ၀န်းနဲ့ နီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တချို့က ပြောပါတယ်။
လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း လွှတ်တော်နဲ့ တပ်မတော်ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ကြိုးကိုင်ရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေဖို ဒီလိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတပ်ဖွဲ့အတွက် နအဖစစ်တပ် ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်က တိုက်ပွဲတွေကြောင့် မိဘဆုံးရတဲ့ တိုင်းရင်းသားကလေး ငယ်တွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်ကတည်းက စပြီးရွေးချယ် စုဆောင်းခဲ့တာလို့လည်း သူတို့က ပြောပါတယ်။
ဒီကလေးတွေကို ပဲခူးတိုင်း၊ အုတ်တွင်းမြို့နားက တိုင်းဗဟို ၆ လေ့ကျင့်ရေးစခန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ရဲမွန်လေ့ကျင့်စခန်းနဲ့ ဒီ့ပြင် လျှို့ဝှက်လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွေမှာ စခန်းသွင်းစစ်ပညာတွေသင်ပေးခဲ့ပြီး အထူးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တာလို့ တပ်မတော်အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက ပြောပါတယ်။
“မိဘမဲ့လိုဟာမျိုးတွေ နေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ စုဆောင်းထားတဲ့ဟာတွေက တော်တော် ကြီးနေပြီ၊ သုံးလို့ ကိုင်လို့ ရနေပြီလေ။ ဘယ်သူမှ ပြောလို့မှ သိပ်အရာမ၀င်ဘူး။ သူပြောမှ ပြီးတဲ့ကိစလေ။ အဲဒါမျိုး ထားတာဗျ၊ ထရိန်နီက ရိုးရိုးတပ်မတော်စစ်သားစုဆောင်းရေးထက် အများကြီးသာတယ်။ လက်နက် ပစည်းကိရိယာအစုံအလင်နဲ့ တကယ့်အဆင့်မြင့်ထရိန်နင်တွေဘာတွေ ပေးတယ်။”
ကလေးစစ်သားတွေအရေး အိုင်အယ်အို (နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်) ကို တိုင်းကြားရာမှာ ကူညီဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ လမ်းပြကြယ် ဦးအေးမြင့်ကလည်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟာ အထူးသက်တော် စောင့်တပ်ဖွဲ့ကို ထူထောင်ထားတာဟာ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် ဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ် ဗိုလ်မှူးတွေကလည်း တယောက်ကိုတယောက် ယုံကြည်မှုရရှိတယ်ဆိုတဲ့အဆင့် မရရှိတဲ့အတွက် ကလေးတွေကိုမွေးတယ်။ ကိုယ်ပိုင် မိသားစုစစ်တပ်သဖွယ် အခုလို အဆင့်မြင့်တိုင်းဗဟို ၆ လို နီးစပ်ရာကလေးတွေ မွေးစားပြီး အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ သူတို့ကို စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် စစ်သားတွေ မွေးယူတယ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်၊ ဟုတ်လည်းဟုတ်နေပါတယ်။”
ကလေးပျောက်ဆုံးမှုတွေမှာ လိုက်ပြီးစုံစမ်းတဲ့အခါ စစ်သားစုဆောင်းရေးနဲ့ လေ့ကျင့်ရေးစခန်းတွေကို မရောက်ဘဲ လမ်းမှာပျောက်ဆုံးသွား မှုတွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း ဦးအေးမြင့်ကပြောပါတယ်။
“ဒီကလေးမျိုးတွေဟာ မိသားစုကို ကာကွယ်မယ့်၊ မိသားစုတပ် ဖြစ်ဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တပ်တနေရာရာမှာတော့ ရှိတယ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်။”
မြန်မာစစ်ဥပဒေမှာ အသက် ၁၈ ပြည့်ပြီး မိဘအုပ်ထိန်းသူရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ရမှ စစ်မှုထမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့ ပြဌာန်းထားပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ တပ်မတော်အကြီးအကဲတွေကိုယ်က ဒီဥပဒေကို မလိုက်နာတာ တွေ့ရတယ်လို့ ဦးအေးမြင့်ကပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ (Human Right Watch ) ရဲ့ စာရင်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကလေးစစ်သား ၇၀၀၀၀ လောက် ရှိနေပြီး ရန်ကုန်အခြေစိုက် အိုင်အယ်အိုရုံးကို ၂၀၀၇ ဖေဖော်ဝါရီကနေ အခုအထိ တရားဝင်တိုင်ကြားလာတဲ့ ကလေးစစ်သား အမှုပေါင်းကတော့ ၁၀၂ မှုရှိနေပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ ကိုယ်ရံတော်အထူးတပ်ဖွဲ့ကို မြင်တွေ့ရစဉ်
Junta chief ‘used child soldiers for bodyguards’
Dec 14, 2009 (DVB) (http://english.dvb.no/news.php?id=3152)
Burma’s junta strongman Than Shwe has surrounded himself withaspecial bodyguard unit that took root 15 years ago and reportedly included child soldiers, sources close to the army have said.
The unit was designed independently by Than Shwe as means to createa“private family army” that will aid his efforts to control the parliament and the army after the 2010 elections. “It was arranged by the old man [Than Shwe] and regular majors don’t even have any say in it,” saidasource close to senior army officials, speaking to DVB on condition of anonymity. The majority of the unit is made up of children of ethnic origin who were orphaned during Burmese military operations in Karen and Shan state around 15 years ago, he said. He added that military training given to the unit was ofasuperior quality than regular army training. The children were trained at No. 6. Central Divisional Training School near Oktwin, in Bago division, and Yeh Mon training school in Rangoon division. “The orphans were collected from various places and are quite old now, but they could be exploited and handled,” he said. “No one else gives them orders as it isamatter that can only be decided by [Than Shwe].” According to Aye Myint, who runs the Guiding Star legal advocacy group, which represents child soldiers in Burma, suspicion among the army’s top brass is high. “Politically, the situation is that the generals can’t trust one another and they are adopting the children to create private family armies,” he said. Human Rights Watch claimed in 2002 that some 20 percent of the Burmese army could be under-18. Burma is thought to have more than 400,000 troops, one of Southeast Asia’s largest armies. The International Labour Organisation (ILO) has received 102 official complaints of under-age recruitment into the army since February 2007, it reported last month. “What is happening now is that when the ILO [officials) come, they look for them [children] at the training school or at the army base,” said Aye Myint. He added that when investigating the disappearance of children thought to have been recruited by the army, some of them do not remerge at training schools but “go missing” and cannot be traced. The claims ofaprivate army would fit the profile ofanotoriously reclusive and paranoid leader, who rarely meets with foreign dignitaries. Despite residing over the ruling State Peace and Development Council (SPDC) since 1992, his political future remains uncertain. According to the Burmese constitution, the SPDC will be forced to cede power after the elections next year, but whether or not Than Shwe takesabackseat role in politics is unknown.
One thought on “ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ကိုယ်ရံတော်အထူးတပ်ဖွဲ့ ထူထောင်ထား”
ထင်တော့ အထင်သားဗျ။ အသက် သုံးဆယ်မပြည့်သေးတဲ့ ကောင်တွေ ဗိုလ်မှူးအပွင့်တွေဘာတွေနဲ့
တပ်ချုပ်ကြီးဘေးနား တွေ့တွေ့နေတာ။ ဒါကြောင့်ကို။။။။